अञ्जली र विजयको मया पिरिम छता छुल्ल पारे ऋषी खड्काले (भिडियो सहित) | Nepalisongskhabar.com
काठमाण्डौ फाल्गुन ९ । बिजया पुनको (पत्थरको मुटु) पछिको धमाकेदार गीत”मया पिरिम”बजारमा गायक ऋषी खड्काको “मया पिरिम” सार्वजनिक गायक ऋषी खड्का र समिक्षा अधिकारीको नयाँ गीत “मया पिरिम” (भिडियो सहित) काठमाडौँ । यतिबेला नेपाली सांगीतिक बजार तातीएको छ, न तातियोस पनि किन जहाँ जहिले जुन बेला पनि जे सुकै हुन सक्ने बजार न हो! गीत संगीत भन्ने बितिकै जस्तोलाई पनि सहज मनोरंजन दिन र लिन सक्ने उपयुक्त औषधि भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाली सांगीतिक बजारमा दिन प्रतिदिन नयाँ गीत भित्रिने क्रम बढ्दो छ । यस्तैमा जिबनमा कसैलाई मन पराईन्छ भने उ प्रति कहिले काहि घुर्किपन पनि आउन सक्दछ, किन कि जस्लाई मन देखि माया गरिन्छ , त्यो मायालाई पाउन यस्ता प्रगाड गर्ने गरिन्छ। यस्तै कथामा आधारित गीत भर्खरै मात्र गायक ऋषी खड्का र समिक्षा अधिकारीको सुमधुर स्वरमा रहेको गीत “मया पिरिम ” सार्वजनिक भएको छ ।
हाल काठ्माण्डौ आफ्नो सांगितिक कर्मथलो बनाईरहेका ऋषी खड्काले यस अघि पनि थुप्रै गीतहरु बजारमा ल्याएर अशंख्य श्रोता तथा दर्शकहरुको मन जितिसकेका छन् । गायक ऋषी खड्का र समिक्षा अधिकारीको नयाँ सागीतिक कोसेली “मया पिरिम ” श्रोता दर्शक माझ लिएर आएका छन्। सर्जक तथा गीतकार रबिन लामिछानेको उत्कृष्ट शब्द सिर्जना राजेको गीतमा ऋषी खड्का गायक आफैले संगीत भरेका छन् भने केशव बाडुले एरेन्ज गरेका हुन् ।
मौसम हिमालीको निर्देशनमा रहेको गीतको भिडियोमा चर्चित मोडेलअञ्जली अधिकारी र बिजय पुन(पथर्को मुटु) को अभिनय रहेको भिडियोमा अन्य कलाकारहरुले साथ दिएका छन् । शिव शरण न्यौपानेले छायांकन गरेको भिडियोलाई प्रविन हुन् भने निम्रोध राईले साथ दिएका छन् । भिडियोमा कैद दृश्य उपत्यका र काभ्रेका विभिन्न रमणीय ठाउँमा छायांकन गरिएको गीतको भिडियोलाई प्रबिन भट्टले सम्पादन गरेका हुन् ।“मया पिरिम ””बोलको गीत गायक ऋषी खड्काको अफिसियल युट्यूव च्यानल मार्फत सार्बजनिक गरिएको हो
Published date : 2021-02-21
गायक सन्तोष विसी र गायिका सविता ढुङगानाको आवाजमा ” घुम्नलाई जाउन कान्छि काभ्रे पलाञ्चोक ” हेर्नुहोस भिडियो सहित
ईन्दिरा जोशीको मिठास स्वरमा ‘मोहनी’ सार्वजनिक ! (भिडियो सहित)
यूके वासी बाँसुरी बाँधकहरुको दोस्रो भेला सम्पन्न ।